Angola : Nesorina tamin’ny lisitra maintin’ny Vondrona Eoropeana ny zotra an’habakabaky ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2018 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, English
(Lahatsoratra ôrizinaly nivoaka tamin'ny aogositra 2009)
Saripikan'i kaysha, navoaka araka ny lisansa Creative Commons
Rehefa nitsahatra nandritra ny roa taona, nokinasa hanomboka indray tamin'ny voalohany aogositra 2009 amin'ny alalan'ny Boeing 777-200ER ny sidina mampifandray an'i Luanda an'i Lisbonne voalohany ataon'ny TAAG. Nanomboka ny sidina fanaony mankany Eoropa indray ny orinasa an'habakabaka nasionalin'i Angola, taorian'ny fanapahan-kevitry ny Vaomiera Eoropeana hanaisotra ny fampiatoana azy, ka mitondra fanantenana vaovao indray amin'ny hanatsarana ny toe-bolan'ny orinasa, izay tsy afaka nizotra ho any Portiogaly raha tsy tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa tamin'ny South African Airlines (zotra an'habakabaka afrikana tatsimo). Araka ny tenimita navoakan'ny vaomiera eoropeana, afa-manohy ny sidina fanaony indray ny TAAG fa “amin'ny fiaramanidina sasatsasany manaraka antsakany sy andavany ny fepetra ilaina ihany”. Midika izany fa tsy mbola afa-mandeha malalaka mankany amin'ny firenena eoropeana hafa tahaka an'i Frantsa ny orinasa angoley. Araka ny kaomisera eoropeana misahana ny fitaterana, António Tajani, mbola ao anatin'ny lisitra maintin'ny Vondrona Eoropeana ny TAAG. Nefa “ankatoavin'ny” Vaomiera Eoropeana ny “ezaka nataon'ny fahefana angôley misahana ny fandehanana fiaramanidina sivily sy ny orinasa an'habakabaka TAAG hamahana tsikelikely sy azo antoka ny olana.” Tamin'ny jolay 2007, nampidirina tao anatin'ny lisitra maintin'ny fitaterana an'habakabaka tsy mahazo misidina an'i Eoropa ny TAAG, noho ny tsy fahampian'ny fiarovana ao amin'ny asany. Talohan'izany ny TAAG nampifandray an'i Lisbonne sy Luanda in'enina isan-kerinandro, ary isan-kerinandro kosa ny mankao Paris. Milaza ny heviny amin'ity raharaha ity i Eugénio Costa Almeida, avy ao amin'ny blog Pululu:
“Havela hanavatsava ny habakabaka eoropeana ihany, tamin'ny farany ny TAAG rehefa naato nandritra ny roa taona, na dia eo aza ny fepetra maro napetraka. Araka ny tenimitan'ny Vondrona Eoropeana, nivoaka androany [14 jolay], sy taorian'ny “nankatoavan'ny” Vaomiera ny “ezaka” vitan'ny fampandehanana fiaramanidina sivily angôley sy ny TAAG hanentsenana tsikelikely ny tsy fahampiana eo amin'ny lafiny fiarovana”, nesorin'ny vondrona eoropeana tao amin'ny lisitra mainty ny anarana [ahitana ny sary famantarana] diera goavan'ny tanim-pasika, ka ahafahany mitatitra olona vonjimaika amin'ny firenena eoropeana – sy hanaraha-maso ny fampiharana ny [fepetra]. Lisbonne, renivohitra paortiogey, no fitodiana nankatoavina, ary afaka mitatitra olona amin'ny sidina 10 isan-kerinandro miainga avy ao Luanda ny TAAG. Na izany aza dia mbola voarara tsy mahazo misidina mankany Eoropa ihany ny orinasam-pitanterana an'habakabaka angôley hafa. Toa mbola tsy mahazo misidina ny lanitra eoropeana ihany ny voromby karazana Boeing B-777, manana laharam-pisoratana anarana D2-TED, TEE-D2 ary D2-TEF. Raha tsy hoe misy antony hafa maro, dia hitako fa misy “karazana fanomezana vahana” fividianana Airbus ihany ao ambadik'izao. Fa taorian'ny lozam-pifamoivoizaina nataon'io kompania io…”
“Efa fantatra tsara ny fifampahoriana ifanaovan'ny kompania an'habakabak'i Angôlà sy ny fahefana eorôpeana. Vao maika moa manasarotra ny lalana fahazoana taratasy fankatoavana ny TAAG izay ahafahany misidina indray mankany Eorôpa ny avonavona mahazatra iatrehan'i Angôlà ny tsikera, manantena fa ho ampifanarahana amin'ny zavamisy angôley ny lalàna iraisampirenena, fa tsy ny mifanohitra amin'izany. Matetika tsy azo sy miova endrika izay lazain'ny vahiny ao Angôlà, tsy hiteny zavatra hafa aho fa sao dia mbola diso famaky sy dika indray ny zava-drehetra, tahaka ny nofinofin'ny vahiny fotsy hoditra ao Angôlà. Ny marina, tiako kokoa ny ho mpandikatenin'izay eritreretin'ny Angôley ihany amin'ny toerana misy ny TAAG : fantatry ry zareo fa misy fikorontanana ao sy fomba fitantanana kitoatoa ny kompania.”
Jereo ny fampitàna an-gazety raha hijery ny lisitra mainty fenon'ny orinasa voarara ao amin'ny Vondrona Eoropeana :
Ankotrihin'ny Vaomiera ny lisitry ny kompania an'habakabaka eorôpeana.